Maitiro Ekudzivirira Kusunungura Reboot YeIOS 9 NaJailbreak | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira sei iOS 9 loop reboot neJailbreak
Iwo matambudziko anowanikwa mune dzakawanda shanduro dzeJailbreak, isu hatisi kuzozviviga. Chokwadi mazuvano zvinoita kunge zvakajairika kupfuura zvakajairwa. Ino nguva tinoreva munyu «Bhuti Loop yeRufu»Zvirinani kuzivikanwa seBLoD, inoitika muIOS 9 uye Jailbreak yayo, iri bhagi riri kuunza vashandisi vazhinji veIOS uye yavo yazvino Jailbreak yakamisidzana pasi, iri bhagi inzvimbo inoitika kana chishandiso chatanga kutangazve, chisingamire, kusvika bhatiri rinopera uye zvichingodaro iwe uine bhatiri, hapana imwe mhinduro kunze kwekudzorera. Asi muActualidad iPhone tinokuunzira dzidziso yekugadzirisa kusawirirana uku kwechinguva.
Zviripachena mhinduro ndeyekudzorera, asi isu hatina imwe sarudzo, iPhone yakafa zvachose kana ichinge yapinda mudunhu rino, saka hatina imwe imwe sarudzo, isu tinochengeta iyo data kuburikidza ne backup, izvo zvisiri zvishoma. Aya ndiwo matanho atinofanira kutevedzera.
Maitiro Ekubuda muLoop Reboot (BLoD) yeJailbreak iOS 9
Chekutanga pane zvese, sekutaura kwatatove taita, tiri kuzoita backup isina kunyorwa yefoni yedu, kukwanisa kuchengetedza data. Kuti tiite izvi, tinobatanidza chishandiso kuPc yedu kana Mac ne iTunes yakavhurika uye nekutevera akajairwa matanho.
Tichaisa foni muDFU maitiro: Kuti tiite izvi, tichabatanidza chishandiso pakombuta neTunes yakavhurwa, tobva tadzvanya bhatani repamba + remagetsi kwemasekondi gumi, mushure memasekondi gumi iwayo tinoburitsa bhatani remagetsi asi chengeta bhatani rekutanga kusvikira iyo icon yeTunes yaonekwa pane skrini uye komputa inoona chishandiso.
Dzvanya pakudzorera chishandiso, kuti udzorere kuIOS 9.0.2
Kamwe kudzoreredza kwapera tichazvimisikidza se «mudziyo mutsva«, Ndizvozvo, nhanho yakakosha, isu hatizosanganise iCloud marongero kana TouchID.
Isu tinotora Pangu yeWindows vhezheni 1.0.1
Isu tinoita Jaibreak.
Tichatanga Cydia nefoni mundege muoti asi neWi-Fi yakaitwa.
Isu tinoisa Cydia Substrate kubva kuBigBoss repository uye tinomirira yakajairwa yekufema kuti itore nzvimbo.
Kana zvave kuitwa, tinodzima chishandiso zvakakwana uye nekuchinjazve.
Iye zvino isu tichamanikidza reboot neimba + simba bhatani kwenguva yakareba.
Nenhanho idzi kune iyo tsamba dambudziko rezvekutangisa rinenge rapera, ikozvino ndipo patinogona kuenderera nekudzoreredza backup neICloud nekupinda data redu. Nepo iyo nyowani vhezheni yePangu ichiburitswa, iyi ndiyo yega uye inonetesa imwe nzira kana tichida kudzivirira dambudziko. Tinovimba yakushandira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira sei iOS 9 loop reboot neJailbreak
Asi iwe wakaverenga kupi izvi? Ndiri kureva iko kukanganisa. Nekuti mune semuenzaniso GSMSpain hapana akataura dambudziko iri.
Pindura kuna saitam
Zvakaitika kwandiriwo. Chii chimwe, ini handikwanise kudzorera backup kubva kuICloud kana iTunes. Zvinondiudza kuti iyo backup backup vhezheni yakashatiswa kana kuti haina kutsigirwa.
Pane chero munhu anoziva kuzvigadzirisa?
Mhoro kwandiri chinhu chakaitika kwandiri, asi mhinduro inoshanda ndeyekuti kutanga nhare inodzimwa wobva wadzvanya bhatani kuti uwedzere vhoriyamu…. Uye nyaya yakagadziriswa
Kune vadziviriri veJeri kutaura kuti iOS yakango gadzikana kuipwanya hahaha ini partoooooo. Kune vatambi vanofarira kudzivirira zvisinganzwisisike! kuti iwe unogona kuisa mamwe chorraditas, ehe ... asi kubva ipapo kuenda kune icho icho chakatsiga uye hakukupe iwe matambudziko kune nyika !!
Kunyatsogadzikana chero bedzi iwe uchiita nehana !!! Kana iwe ukaisa zvakakomba masitoreti uye usapenga nema tweaks ausingatombo shandisa, unogona kunakidzwa neyakagadzika zvachose uye yakasarudzika mudziyo kune kwako kufarira.
Izvozvi ... zvakatsiga ... mira ndiri kuputsa uye handigone kunyora hahahahahahahahaha ... usataure zvinotyisa !!!
usave wekubhinya uchiuya kuzobiridzira vamwe kana iwe usingade ejeri kupaza apa unouya kuzofunga enda kumaforamu maforamu uye mira kufongora pano
Mhinduro yekutanga ndeyekutanga iyo iphone mune yakachengeteka modhi, uku ndiko kumanikidza simba + kumba kudzamara iphone / ipad yadzima uye kana uchibatidza, sunungura mabhatani aya uye pinda vhoriyamu + kusvikira iyo iphone yatanga, mune iyi modhi haishande kubvisa , ipapo ichaenda ku cydia uye bvisa iyo tweak yakakonzera dambudziko, wobva wadzima chishandiso kuti chibatidze zvakare, uye netarisiro kuti ichagadziriswa. Kana izvi zvikasashanda, saka kana uchifanira kudzoreredza, asi kutanga zviri nani kuyedza kugadzirisa pasina kudzosera. Nhasi mushure mekuisa activator, yangu iphone yaive mune isingagumi chiuno chereboots uye ini ndakakwanisa kuigadzirisa nekutanga yakachengeteka nzira uye nekubvisa activator.
ps activator inoshanda mushe uye senge imba chaiyo ndingaite sei kuti ndirarame ndisina maviri maviri akakosha matweaks iphone 6 kuwedzera 9.0.2 pasina matambudziko kusvika parizvino uye kune zvakataurwa pamusoro apa iphone inogona kugadzikana chero bedzi iwe uchiziva zvekuisa uye chii kwete ¬¬
Iyo chiuno chinoitika kwandiri kana ndichiedza kuisa iyo yapfuura backup (iOS 8.4 ine jailbreak) kuburikidza neTunes kudzoreredzo yandakaita.
Ndakaedza nzira mbiri:
iOS 9.0.2 yakadzoreredza yakachena - jailbreak - cydia subs yakagadziridzwa - backup kuburikidza iTunes - inoenderera reboot
iOS 9.0.2 yakachena kudzoreredza - backup kuburikidza iTunes - kuenderera reboot (haigone kusvika kujeri)
Kubva pano chinhu choga chandinogona kujekesa ndechekuti yangu backup neTunes kubondera nekuda kwechinhu chisingaenderane neIOS9. Ini ndinofungidzira kuti kune data kubva kune yapfuura iOS jailbreak iyo inochengetwa mukopi yekuchengetedza uye kuti kana uchidzoreredza inopwanya system yangu.
Chero ipi pfungwa kana rubatsiro kuti ndikwanise kuisa iyo yapfuura backup yandaive nayo yeiyo iOS 8.4? Parizvino, makopi kuburikidza neICloud anditendera kuti ndive neruzivo rwekutanga rwakakosha asi neTunes ndine zvimwe zvakawanda.
Pindura kune niniking
Mhoro shamwari, ini ndine ipad2 uye ndinayo mune chiuno, handigone kuiburitsa imomo, yanga isati yamboitika kwandiri uye kuti akawanda maApple madhiragi akapfuura nemaoko angu, asi sekukanganisa uku muhupenyu. Ndakaitumira ku chipspain.com kuti igadziriswe uye havagone kuita chero chinhu. Chero ani anoziva chero mhinduro ???
Kana iri kusunungura, iwe unofanirwa kuiisa muDFU uye kudzorera zvakare.
Ndatenda shamwari, neiyi ndakagadzirisa dambudziko.
Zvinoitika kuti nezuro ndakapinda Cydia uye paive nezvakatsoropodza (cydia installe, substrate, nezvimwewo) uye pandakapedza kuisa ndakadzoreredza ma5 uye zvakazoitika kuti ndakanga ndasara ndiri muchiuno. Dzosera kuIOS 9.1 kuti uone mashandiro ayo. Nhasi ndafunga kudzokera kuna 9.0.2 uye zvinoitika kuti ndakaita zvakajairwa, ndadzorera iyo iPhone, ndadzorera backup, ndakaita Jailbreak uye zvazoitika kuti zvadzokera kune chiuno. Ini ndakatevera nhanho idzi uye ini ndatotangazve foni ka2 (kuitira kuti XD ibhururuke) uye haichagari. Thanks shamwari
Springtomize 3 yave kuda kuenderana neIOS 9